Guddiga doorashooyinka Qaranka oo u jawaabey Beesha Caalamka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddiga doorashooyinka Qaranka oo u jawaabey Beesha Caalamka
Ardaan Yare 20 December 2019
Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa jawaab ka bixiyey warkii kasoo yeeray Xubnaha Beesha Caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya,kuwaas oo Madaxda Dowladda looga dalbanayey hanaanka loo marayo doorashada Soomaaliya.
War-Saxaafadeed kasoo baxay Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa qodobo ka kooban Lix loogu jawaabey Beesha Caalamka.
Hoos Ka Akhriso War-Saxaafadeedka Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka.
Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka waxa uu ka mahadcelinayaa taageerada beesha caalamka iyo ka go’naanta ay u muujiyaan inay garab istaagaan Guddiga iyo howlgalka doorashada.
Guddigu wuxuu caddaynayaa in uu diyaariyay howlaha farsamo ee muhiimka u ah u diyaar garawga hirgelinta doorashada. Wuxuu guddigu rajaynayaa in arrimaha muhiimka u ah doorashada lala garab istaago sida diyaarinta miisaaniyadda doorashada, sugidda amniga goobaha diiwaangelinta iyo codbixinta,
Dhamaystirka sharciyada lagama maarmaanka ah gaar ahaan sharciga doorashooyinka in Golaha Shacabku ansixiyo waqtigii lagu ballamay si uu saldhig ugu noqdo qabya tirka xeerarka doorasho ee na horyaal.
Guddigu wuxuu rajaynayaa in nidaamka doorasho ee ku soo baxa sharciga uu noqdo mid la fulin karo isla mar ahaantaana tixgelin gaar ah la siiyo arrimahan soo socda marka go’aan laga gaarayo nooca doorashada iyo nooca diiwangelinta ee la ansixinayo:
1. In nooca doorashada la waafajiyo mabaadida Dastuurka JFS, iyo Sharciga Axsaabta
2. In hirgelintiisu ilaaliyo xuquuqda muwaadiniinta ka qaybgalaya doorashada (tartame iyo codbixiye).
3. In aan GMDQ la saarin mas’uuliyad fulinteedu adagtahay sida soo saaridda habraaca astaynta deegaan doorashada iyo dhowrista qoondada dumarka.
4. In nooca doorasho uusan horseedin khilaaf iyo dagaal, ilaaliyana midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
5. In uu ilaaliyo xaquuqda dhallinyarada, dadka baahiyaha gaar ah qaba iyo dadka aan hadda baarlamaanka metelaad ku lahyn.
6. In GMDQ la siiyo fursad uu ku xulan karo nooca diiwangelinta codbixiyaha haddii uu arko in uu la jaanqaadi karo duruufaha ku xeeran ama saamaynta ku yeelan kara hawlaha doorashada.
Ugu dambayn waxaan codsanaynaa in Guddiga lagu garab istaago waajibaadkiisa dastuuriga ah, lana siiyo tixgelin duruufaha uu ku shaqaynayo.
Madaxweyne laftagareen oo si kulul u weerarey Siyaasiyiinta mucaaradka
Dowladda iyo Dowlad Goboleedyada oo Shir uga furmaayo Kismaayo